Ixabiso leMpahla yoPhakathi - Ixabiso loMyili weNdalo yangaphakathi - Nobili Umyinge wangaphakathi, i-Studio, uMakhi, uMklami, amaFemu, iiMveliso, amaxabiso
Ingcamango design and bokuceba lisoloko eziqulathwe ekulungiseleleni ucwangciso kunye nezisombululo zesimbo, kunye uluhlu imizobo 2d kwinkampani design, baya kuba lilitye lembombo umsebenzi wethu kunye isiseko kamva impumelelo imihombiso. Kuloluhlu Ixabiso loyilo lwangaphakathi sinike ingqwalasela ethile kwinkcazo yecandelo leenqaku ngalinye kwiinkonzo ezinikezelwa yiofisi yezokwakheka kunye noyilo lwangaphakathi. Ekupheleni kwephepha sinikezela ngolwazi oluncedo kubathengi abaza kukhetha ukucwangciswa kwendlu yangaphakathi, ukufumana ulwazi malunga namathuba afanelekileyo okutshintshwa okwenziwe emva kokuyila koyilo lwangaphakathi. Iphothifoliyo yeeprojekthi zeprojekthi zangaphakathi zezindlu zineklasi ze-attic, ii-villas zanamhlanje kunye namaxabiso ahlukeneyo kumgangatho ngokuxhomekeke kwisitayela esikhethiweyo kunye nobunzima beprojekthi.
Ixabiso lemveliso yeeprojekthi zokuyila ngaphakathi
Ukufezekiswa kwendlela yokwakha yangaphakathi kwindlu yokuhlala
Yonke iprojekthi yoyilo lwangaphakathi eyenziwe yi studio Nobili Design Interior ziya copyright yi bezakhiwo kunye nabayili professional odalwe umnini kuchaziwe ngqo (amagumbi, isimbo izindlu zale mihla Classic, ii-ofisi kunye nezinye iintlobo amakhaya entsapho.) Ngokuhambelana kunye neminqweno ezithile client, ngokunxulumene apho iye yaphathwa projekthi design ngeqondo standard okanye iprojekthi turnkey kunye ithuba lokwenziwa izinto ezidweliswe kwiiprojekthi design kanye iliso 3d ezayame kwisiza. Bona project map design apho thina kuthunyelwe ulwazi olongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba amaxabiso design ukuba izindlu kunye nezindlu eyenziwe Noble Interior Design eziqondwa iinkonzo zethu elizayo kunye namaxwebhu weeprojekthi wenziwa liqela lethu abaqulunqi, abaqulunqi, abaqulunqi abanokufikelela kunye nokulula ukuqonda ulwazi. Enoba uhlobo lwenkonzo design apho wena ekuqaleni wakhetha, wena inokuyalela inkonzo kongeza zavenga ibandakanya inkxaso epheleleyo inkampani yethu ukusukela design isebenza njengoko sungula 3d. Inkxaso ekukhethweni kwendawo yokwakha yangaphakathi kunye nokuqeda inkampani kwintsimi yokwakha inikezwa ngentlawulo yenkampani yethu. Isici esibonakalayo kakhulu esinikezelayo xa ukhetha inkonzo yendalo yoyilo lwezindlu okanye izindlu ixabiso leprojekthi. Ixabiso lokwilwa kolwazi lwangaphakathi ngaphakathi kwindlu yendlu ye-17-25 ye-euro square meter kunye neendawo zokuhlala ze-25-40 euro square meter. Amaxabiso iifem ezahlukeneyo zokwakha kunye neengcali ngamnye kuyilo elingaphakathi kunzima ukuthelekisa ngenxa umahluko ezibalulekileyo kweenkonzo, kwaye umahluko amaxwebhu kufumaneka ekupheleni projekthi design (singasathethi ke ingqiqo kuyilo unique zenziwe kwaye zigqitywe kodwa zingabonakali ngomgangatho wezinto eziphathekayo esizisebenzisanayo xa sicwangcisa iikhontrakthi zemihlaba yangaphakathi). Sinethemba lokuba inkcazo eneenkcukacha isindululo kunye nendlela yethu yokubala iprojekthi design preturlui indlu okanye indlu e Constanta, Bucharest, Brasov kunye Ploiesti ngokuqinisekileyo uya lula isigqibo sakho. Ixabiso kweenkonzo zokuphuhlisa design Iiprojekthi izindlu okanye emakhayeni ukuba uphumeze ukongeza kwinkonzo esemgangathweni athengwe kuyahlukana ngokuxhomekeke kwiimfuno nokuntsonkotha kweprojekthi kwaye ziya kwaziswa ngokwahlukileyo abaxhamli. Uza kufumana kolu didi iiprojekthi design yezindlu ibali zodidi eliphezulu classic izindlu isimbo Villas Mediterranean mihla wenza kwiintlobo ezahlukeneyo izakhiwo kwilizwe liphela ngamaxabiso phakathi 17-30 euro square metre nganye emizini ezifana Bacau, Iasi, Suceava, Buzau, Craiova, Giurgiu, Focsani, Piatra Neamt, Braila, Tulcea kunye Galati.
Ixabiso leMpahla yangaphakathi